I-cyst ye-sebaceous yi-atheroma engabonakala phantse nayiphi na inxalenye yomzimba womntu. Yaye ulusu lobuso kulo mbandela, ngelanga, alukho.
Zonke iimfihlelo ezimele zifike emkhatsini wesikhumba ngoncedo lwe-excretory duct ye-gland ye-sebaceous ngenxa yokukhutshwa kwayo kuhlanganiswe kwi-capsule. Le yenye yezizathu eziphambili zokubonakala kwe-atheroma ebusweni.
Kutheni kwenzeka i-atheroma?
Ukuqonda ukuziphatha kwezigulane zethu ezicokisekileyo kunye nokuqwalasela iindlela zokuqala kwe-atheroma ebusweni, kufuneka ukwazi ulwazi oluthile.
Iintlobo zeengqungquthela ezizimeleyo:
Iingqungquthela zamahhala ezinokukhutshwa kwindlela yokuhamba emzimbeni;
ulandelelwano - isinyithi, apho umbhobho ophumayo uvulekile kwi-follicle yeenwele.
I-cyst ye-free gland ingaxhomekeka kwisini. Ukuba ngaba abafazi abanezikhupha eziphumayo zifumaneka kwindawo ebusweni, ke ngoko amadoda akhoyo nje apho kungekho nwele ikhula. Kodwa ukwakheka kwee-cysts zobukholi akuxhomekeke kwisondo kwaye kunokubonakalisa nge-frequency efanayo, kokubili kumadoda nakwabasetyhini.
Ekubeni i-atheroma ebusweni ibunjwe ngenxa yokuqokelelwa kwamanzi okufihlakeleyo kunye nokukhutshwa kwendlela yokuhamba, izizathu zokubonakala kwazo zikho kwizinto ezininzi ezilawula umsebenzi we-glandulae sebacea.
nempembelelo yeziyobisi ze-hormonal;
ukuphulwa komgaqo-nkqubo wokuzimela kunye nomphakathi;
izifo zengxaki ;
ukungasebenzi kwephepha lokutya.
Uphi i-atheroma kwindawo?
I-atheroma ebusweni ingafumaneka kwiindawo ezifana nale:
indawo ejikeleze emlonyeni;
Ukuba i-atheroma ebusweni ivuke, ngoko kukho ukuphakama okuphezulu kokuqokelela kuyo. Ngokuqhelekileyo loo cyst ivule ngokukhawuleza. Kodwa isiphumo esinjalo asisoloko sichaza ukuphumelela kwesi sifo.
Ukuzikhusela kwaye ungabhekane neengxaki ezingaphezulu ezingabonakala ngenxa yama-cysts, kufuneka usebenzise ngokukhawuleza ukususa i-atheroma ebusweni.
Ukuba unomdla wendlela yokulahla i-atheroma ebusweni, ngoko kukho iindlela ezimbalwa, okanye kunye. Kwi-100% yamatyala, le cyst ipheliswa kuphela, ngokungakhathaliseki isigaba sayo.
Imithetho ekufuneka ilandelwe ukukhusela ukubunjwa kwe-atheroma ebusweni:
Yenza ucoceko oluqhelekileyo lwee-pores.
Sebenzisa amabhati okuhlambela ngaphambi kokuba uhlambe.
Ukuhambelana nokutya okuchanekileyo.
Qala ukusebenzisa iivithamini A, E, C.
Nikeza ukhuselo lolusu ngexesha lokubanda.
Nangona i-atheroma ebusweni kwaye ayiyiyo into eyingozi, kodwa ukubonakala kwayo kungabangela ukungathandeki kwengqondo kunoma yimuphi umntu. Ngoko ke, zama ukulandela ulusu lwakho ngokucophelela ngokunokwenzeka.
Antibiotics emva kokutsalwa kwezinyo
Ukutshintshwa kwegazi kwi-acne
Indlela yokukhusela umlomo wakho emoyeni naseqabini?
Imimic imibimbi ecaleni kwamehlo
I-Cryomassage yobuso kunye ne-nitrogen enomlambo
I-Zaeda emacaleni omlomo - izizathu kunye nokunyangwa kwazo zonke iintlobo ze-cheilitis
Iimaski zesikhumba esinamafutha ebusweni-uncedo olungcono kakhulu lwezengcali kunye nekhaya
I-sebaceous gland cyst
Iipatches zamehlo - ukurhoxisa isikhumba
Ukujongana nokunyamekela emva kwama-40
I-diamond microdermabrasion - umphumo ongenakunqatshwa wesikhumba esilungisiwe
Iibhola ze-ankle ze-fashionable ekwindla ka-2013
Isikrini somprojekti ngegesi kagesi
Uchungechunge oluthi "Charmed": ngaba kuya kuba nokuqhubeka?
Yintoni iphupha lamaphengwane?
USean Penn: ukungaphumeleli kokuqala kweencwadi kunye namanxeba omdala omthandayo
Intlawulo ekuzalweni komntwana wesithathu
I-compressor engenasiphelo kwi-aquarium
Qasha imoto kwiCzech Republic
Indlela yokupheka i-semolina porridge?
Izixhobo zokupaka zeekhuni zekhitshi
Hemolysing colibacin kwiintsana
Imithombo yomshushu eHungary
I-Ampelic strawberry - ekhulayo kunye nokunakekelwa